कस्तो छ दलहरूको आत्मसमीक्षा ? - Naya Patrika
कस्तो छ दलहरूको आत्मसमीक्षा ?
रमेश सापकोटा, शुरोजंग पाण्डे | जेठ ०५, २०७४
हामीले सोचेजस्तो नतिजा आएन । यद्यपि, पूरै नतिजा आउन बाँकी छ । २० वर्षपछि निर्वाचन गर्यौँ, यो नै सफलता हो । अब पहिलेका त्रुटिहरूलाई करेक्सन गरेर जाऔँ । : शेरबहादुर देउवा, सभापति
– दोस्रो निर्वाचनसम्म ५० प्रतिशत कटाउने लक्ष्य
निर्वाचनको पूर्ण समीक्षा गरिसकेका छैनौँ । प्रारम्भिक समीक्षामा अपेक्षाअनुसार परिणाम आएन भन्ने हो । ठ्याक्कै यति सिट जित्ने भन्ने लक्ष्य नभए पनि ५० प्रतिशत कटाउने भनिएकाले पहिलो स्थानको सम्भावनालाई सन्तोषजनक नै मानेका छौँ । कांग्रेसले अहिलेकै जति धेरै स्थान जित्ला भन्ने लागेको थिएन । तर, धेरै ठाउँमा कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनले उनीहरूको केही बढी सिट आयो । ८–१० स्थानमा सत्ताको दुरुपयोग र धाँधलीमार्फत परिणाम प्रभावित तुल्याइएको छ । तर, बहुमत सिट जित्ने लक्ष्य पूरा गर्न दोस्रो चरणको निर्वाचन पर्खिनुपर्ने स्थिति देखियो । अहिलेको परिणामले सकारात्मक सन्देश दिएकाले दोस्रो चरणमा लक्ष्य पूरा गर्छौं, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी तेस्रो स्थानमै हुनेछ ।
हाम्रो अपेक्षाअनुसार नै चुनावको नतिजा आएको छ । सांगठनिक रूपमा जसले जिते पनि एजेन्डाका हिसाबले हाम्रो जित भएको छ । माओवादी निराश छैन, खुसी नै छ : टोपबहादुर रायमाझी, नेता
अनपेक्षित नतिजा, तर विचलित हुँदैनौँ : राप्रपा
लड्दैपड्दै दौडिन जनताको आदेश : नयाँ शक्ति